BBC: युवराज खतिवडापछि वामदेव गौतम नयाँ अर्थमन्त्री कि विष्णु पौडेल ? - Everest Dainik - News from Nepal
BBC: युवराज खतिवडापछि वामदेव गौतम नयाँ अर्थमन्त्री कि विष्णु पौडेल ?
काठमाडौं, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजिनामा दिएपछि नयाँ अर्थमन्त्री को बन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । कतिपयले वामदेव गौतम नै अर्थमन्त्रीका रुपमा सरकारमा आउने चर्चा गरेपनि यसबारेमा अझै स्पष्ट तस्वीर बाहिर आएको छैन । यसैबीच बिबिसी नेपाली सेवाले भने चर्चामा नरहेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा आउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । पढ्नुस बिबिसीमा प्रकाशिासत यो सामग्री
सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयको बिहीवार राष्ट्रिय सभामा नेता वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र नयाँ अर्थमन्त्रीको चर्चा चुलिएको छ।
यसअघि नेकपाभित्र देखिएको ‘समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ले सङ्घीय र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान्?
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका भनाइमा बिहीवार भएको सचिवालय बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे ‘समग्रमा छलफल’ भयो।
तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे बुझ्न नपाएको उनको जबाफ थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिका साथै निश्चित मापदण्डको आधारमा’ त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने उल्लेख छ।
उक्त प्रसङ्ग उठाउँदा पौडेलले भने, “अनिवार्य भन्ने त के कुरा भयो? संवैधानिक रूपमा उहाँको अधिकारको कुरा हो। परामर्श त उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ नि। पहिला पनि परामर्श गर्नुभएकै हो।”
आफ्नो निम्ति राष्ट्रिय सभाको ढोका खुलेपछि नेता गौतमले पनि सरकारमा सहभागी हुने इच्छा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
को बन्ला नयाँ अर्थमन्त्री?
कतिपयले पौडेल पनि अर्थमन्त्री बन्न सक्ने आकलन गरेका छन्। उनले पहिला पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए।
त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा पर्न सक्ने उनीहरू ठान्छन्।
प्रचण्ड निकटस्थ नेताहरूले पनि नेता गौतम वा पौडेल नै खतिवडाको उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावना बढी रहेको औँल्याएका छन्।
तर महासचिव पौडेलले बीबीसीसँग कुरा गर्दै सङ्क्षिप्तमा भने, “मलाई पार्टीकै कामको बोझ छ, यति नै पर्याप्त छ। मलाई यही जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगिरहेको छ।”
त्यसो भए तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्न त? भन्ने प्रश्नमा उनले ‘अनिच्छा’ शब्द प्रयोग नगरी त्यही जबाफ दोहोर्‍याए।
के अर्थमन्त्री हटाउन गौतम-अस्त्र प्रयोग भएको हो?
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले यसै साता बीबीसीसँग भनेका थिए, “राजस्वमाराहरू एकदम क्रुद्ध र आक्रोशित रूपमा उहाँविरूद्ध लागिपरेका छन्।”
नेकपा स्थायी समितिका एक सदस्यले ‘पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बनेका बेला खतिवडाका कारण फेरि बिथोलिने देखिएपछि वामदेव गौतमलाई अघि सारिएको’ बीबीसीलाई बताए।
“बाहिर व्यापारी-व्यवसायीहरूको पनि अर्थमन्त्रीका कारण हामीलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्ने ठूलो आवाज छ, जनमत पनि नकारात्मक बनेको देखिन्छ,” ती नेताको भनाइ छ।
उनले भने, “उहाँलाई बिदा गर्नुपर्छ र राख्नैपर्छ भन्नेमा पार्टीभित्र फेरि द्वन्द्व हुने देखिएपछि त्यसको सहज हल गर्न वामदेवजीलाई अचुक अस्त्रको रूपमा साथीहरूले अघि सारेको पक्का हो। किनकि उहाँ अघि सरेपछि अरू टिक्ने कुरा थिएन।”
प्रधानमन्त्रीको भित्री रोजाइमा रहेका खतिवडाको बहिर्गमनको निम्ति गौतमभन्दा अर्को पात्र नदेखिएको ती नेताले बताए।
तर खतिवडाको बहिर्गमनपछि गौतमले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना कमजोर रहेको प्रधानमन्त्रीपक्षीय नेताहरूको बुझाइ पाइन्छ।
सरकारमा रहेका शीर्ष नेताहरू नै फेरिने वा पूरै नयाँ टीम पठाउने निर्णय भएमा भने अनुमान र चर्चाभन्दा अवस्था फरक हुनसक्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरू बताउँछन्।